नयाँ रिमोट टोलीहरूको लागि समस्या समाधान उपकरणहरू - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक9सक्छ, 20217सक्छ, 2021 फ्रान्की वालेस अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, Gigs किन्नुहोस् र बेच्नुहोस्, Gigs किन्नुहोस्, चीनियाँ स्वतन्त्रता, सम्पादकको पिक, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, gigs, बिक्रीको लागि Gigs, ग्लोबल थोक अनलाइन, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, Gigs पोष्ट गर्नुहोस्, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, गिगहरू बेच्नुहोस्, तपाईंको Gigs विश्वव्यापी रूपमा बेच्नुहोस्, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, साइड Gigs, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
नयाँ टाढाका टोलीहरूले ब्यवस्थापकहरूको लागि विशेष चुनौतिहरू प्रदान गर्दछन् जुन सही उपकरण र प्रविधिहरूको साथ समाधान गर्न सकिन्छ।
Iterative विकास एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान गर्दछ जसले टीमहरूलाई कम कठिनाईको साथ प्रभावी समाधानहरू विकास गर्न मद्दत गर्दछ।
टेक्नोलोजी छनौट गर्नुहोस् जुन समाधानहरू आदर्श बनाउनको लागि दूर टिमहरूका बीच प्रभावी दिमागलाई समर्थन गर्दछ।
उचित सञ्चार उपकरणहरूले अराजकताको आयोजन गरेर यस तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ।
रिमोट वर्कफोर्सको प्रबन्ध गर्दै
नेताहरूले विचार गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको प्रोजेक्टहरूमा सहयोग गर्दा टाढाको कार्यबलको व्यवस्थापन कसरी गर्ने। केहि नयाँ डिजाइन गर्न, पुरानो केहि सुधार गर्न, वा नयाँ समाधानहरू नविकरण गर्न सँगै काम गर्नु प्रभावी सञ्चार उपकरणहरूको आवश्यक पर्दछ। यो महत्वपूर्ण छ कि यी उपकरणहरूले मानिसहरूलाई सँगै काम गर्न, एक अर्कालाई बुझ्न, र कार्यमा स्पष्टता ल्याउन सहयोग गर्दछ।
टीम नेताहरूले सम्भावित रिमोट कार्य समस्याहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक छ जुन पहिले देखा पर्न सक्छ। केहि दूरीमा प्रभावकारी सment्लग्नताको प्रचार गर्ने तरिकाहरू समावेश:
स्टाफ सदस्यहरूको लागि बिभिन्न समय क्षेत्रहरूबारे ध्यान दिँदै, सम्पूर्ण टीमले नियमित रूपमा बैठकहरूको समय तालिका मिलाउन सक्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै।
सञ्चार र स्थिरतालाई प्रोत्साहित गर्ने उपकरणहरू प्रयोग गरेर टोली सदस्यहरूका लागि तनाव कम गर्दै।
रिमोट जस्ता सदस्यहरूको लागि रचनात्मक तरिकाहरू पत्ता लगाएर टीम टोली कोहसेन्स निर्माण गर्दै टीम निर्माण गतिविधिहरु.
यी समस्या समाधान गर्ने उपकरणहरूले श्रमिकलाई सशक्त महसुस गर्न पनि मद्दत गर्दछ। जब सबैसँग विचारहरू योगदान गर्न र सम्भावित समाधानहरू मुल्या .्कन गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, रचनात्मकता बग्दछ, र उत्पादकता बढ्छ। यो प्रक्रिया सहजसँग बगिरहेको सुनिश्चित गर्न, प्रबन्धकहरूले उनीहरूको टाढाको टोलीहरूलाई खाकाको साथ प्रदान गर्न आवश्यक पर्दछ।
समस्या समाधानको लागि फ्रेमवर्क
योगदान प्रबर्धन गर्न पहिलो चरण समस्या समाधानको लागि एक फ्रेमवर्क स्थापना गरेर हो। तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुने एउटा उपकरण हो पुनरावृत्तिक विकास। किनकि कुनै पनि समस्याको बहु समाधान हुनसक्दछ, तपाईंको कम्पनीको लागि उत्तम उत्तर पत्ता लगाउन धेरै काम चाहिन्छ।
Iterative विकास तपाईं टेस्ट र काम न्यूनतम गर्दा त्यसो गर्न मद्दत गर्दछ। यो एक फ्रेमवर्क प्रदान गर्दछ कि तपाइँको कर्मचारीहरु लाई धेरै समाधानहरु लाई आदर्श बनाउन को लागी अनुमति दिन्छ, तब तिनीहरुलाई चिमटे जब सम्म अन्तिम समाधान चरणमा केहि समाधानहरु छोडिदैन। Steps चरणहरू समावेश:
परिभाषित सम्भावित समाधानहरू मंथन गरेर चुनौतिहरू।
डिजाइन समाधानहरूको उदाहरणहरू देखाउने एउटा तरिका।
परिष्कृत गर्नुहोस् सबैको प्रतिक्रिया प्राप्त गरेर प्रक्रिया।
सिर्जना प्रोटोटाइप अन्तिम समाधानहरूको लागि (२- 2-3)।
परीक्षण यी समाधानहरू।
यस प्रक्रियाको साथ तपाईंको टीमलाई मद्दत गर्न, प्रत्येक प्रारम्भिक समाधानको समीक्षा गर्नुहोस् कि यो डिप्लोय गर्न यथार्थपरक छ कि छैन, यो लगानीको लायक छ कि छैन, र यसले कम्पनी र तपाईंको ग्राहकहरूलाई कसरी फाइदा पुर्‍याउँछ।
यस प्रकारको समस्या सुल्झाउने प्रणालीलाई टोली इनपुटको ठूलो सम्झौता चाहिन्छ, टीमका सदस्यहरूका लागि योगदान पुर्‍याउने बहु अवसरहरू।
जडानको लागि उपकरणहरू
यस प्रकारको रूपरेखाले तपाइँको टीमलाई केन्द्रित र व्यवस्थित राख्दछ तर प्रभावकारी उपकरणहरू आवश्यक छ। जब कर्मचारीहरू बन्दुकमुनि रहेका हुन्छन् एक कडा म्यादमा समस्याहरू समाधान गर्न, दिमागमा काम गर्ने सत्रहरू विशेष गरी दुर्गम कामदारहरूको लागि व्यस्त हुन सक्छ।
उचित सञ्चार उपकरणहरूले अराजकताको आयोजन गरेर यस तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मुख्य तरीकाहरूमा brainstorming बैठक सुधार:
सत्रलाई सहज पार्न समस्याको जटिलता बुझ्ने कसैलाई नियुक्त गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं सफ्टवेयर समाधान डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने, परियोजना ब्यवस्थापन कौशल संग एक सफ्टवेयर विकासकर्ता एक आदर्श विकल्प हुन सक्छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सँगै ल्याइएको टोलीसँग अनुभव र दृष्टिकोणको एक विस्तृत श्रृंखला छ र यसैले परियोजनामा ​​भाग लिन्छ।
एक हिमभंग गर्ने गतिविधि संग व्यक्ति मानिसहरूलाई सत्रमा सामेल हुन मद्दत गर्नुहोस्। त्यसो भए विचारहरूलाई स्वतन्त्र बन्न प्रोत्साहन दिनुहोस् जब सम्म केही विचारहरू अघि नहुनसम्म।
यहाँ तीन उपकरणहरू छन् जुन तपाईले समस्या समाधान गर्ने प्रोजेक्टहरूको लागि टीम वर्कलाई प्रमोट गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
Brainstorming सत्रहरू प्रबन्ध गर्न, भर्चुअल व्हाइटबोर्ड प्रयोग गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्। यो सजीलै तपाइँको टाढाको टोली बीचको सहकार्यलाई अनुमति दिन्छ। डिजिटल स्टिकी नोट र र color्ग कोडिंग विकल्पले उनीहरूलाई विचारहरू व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ जुन सबै सहभागीहरूको लागि स्पष्ट छ। यो समाधानले तपाईंको टीमलाई वास्तविक समयमा पनि काम गर्न अनुमति दिन्छ।
अन्य विकल्पहरू डिजिटल ह्वाइटबोर्ड प्रणालीले प्रदान गर्न सक्ने लेआउट विकल्पहरूको लचिलो दायरा र अन्य प्रणालीहरूको साथ एकीकरण समावेश गर्दछ। उदाहरण को लागी, परियोजना ब्यबश्थापन उपकरण संग एकीकरण चाँडै तपाईको अन्तिम समाधानहरु लाई परीक्षणका लागि माइलस्टोन्स र टाइमलाइनमा अनुवाद गर्न सकिन्छ।
जब सबैसँग विचारहरू योगदान गर्न र सम्भावित समाधानहरू मुल्या .्कन गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, रचनात्मकता बग्दछ, र उत्पादकता बढ्छ।
म्यान्ड म्यापि ite पुनरावृत्तिक विकासको लागि समाधानहरूको आधार रेखा सिर्जना गर्न सरल तरिका हुन सक्छ। किनकि यो दृश्य तत्व हो, दिमाग म्यापि .ले टोलीका सदस्यहरूलाई उनीहरूले बैठकमा के हेरिरहेका छन् राम्रोसँग राख्न मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, अनुसन्धानले देखाउँदछ कि एउटा दिमाग म्यापि .को फाइदाहरु श्रमिक बीच उत्पादकत्व सुधार गरिएको छ।
तपाईं आफ्नो केन्द्रीय विषयवस्तुको रूपमा समाधान गर्न प्रयास गरिरहनु भएको समस्या प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट बाहिर काम गर्नुहोस्। माइन्ड म्यापि creative रचनात्मक मंथनको लागि अझ बढी प्रभावकारी छ समाधान जब तपाईं ठाउँमा केही ग्राउन्ड नियमहरू राख्नुहुन्छ। एक समय सीमा तोक्नुहोस्, सम्पादन गर्नुहोस् वा विचारहरू बाहिर आउने बित्तिकै न्याय नगर्नुहोस्, र अन्य टोली सदस्यहरूलाई सत्रमा मल्टीटास्किंगबाट बच्न सहयोग गर्नुहोस्।
जडान र सुरक्षा
सिमलेस सत्रहरू समर्थन गर्न, तपाईको आईटी डिपार्टमेन्टसँग भेट्नुहोस् तपाईंको भर्चुअल आदर्श सत्रहरूको लागि ब्यान्डविथ र हार्डवेयर आवश्यक छ भनेर निश्चित गर्न। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सबै अपडेट गरिएको छ, उत्तम प्रदर्शन गर्दै र तपाइँको डाटा सुरक्षित छ। तपाइँको बैठकहरू, तपाइँको टाढाको कर्मचारी, र तपाइँको कुरा सुनिश्चित गर्न यो आवश्यक लगानी हो व्यापार सबै सजीलो चलिरहेका छन्.
जब नयाँ टाढाको टिमहरूले एक टाईट डेडलाइनमा टेबुलमा समाधानहरू ल्याउन आवश्यक हुन्छ, व्यवस्थापकहरू र नेताहरूले यी टोलीहरूबाट उत्तम ल्याउने प्रभावकारी तरिकाहरू खोज्नु पर्छ। तपाईको टोलीको प्रबन्ध गर्नुहोस् ताकि उनीहरुसँग मिलेर साझेदारी गर्न सहजै महसुस हुन्छ। आविष्कार भएसम्म सरल समाधानहरूले निर्दोष रूपमा टाढाको कार्य वातावरण प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
चित्रित छवि स्रोत.
सांप्रदायिक समाचार टाढाको काम घरबाट काम गर्नुहोस्